वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु होसियार ! - Nepal, Himalayas, political news, science & Technology, Social, sports, economy, Business, Entertainment, Interview, Audio, Video, Actor, Actress, blog
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु होसियार !
स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नभएपछि आफ्नो परिवारको गरिबी अन्त्यको सपना देखेर २०६१ सालमा इराक उडेका झापा तोपगाछिका प्रकाश अधिकारी, धनकुटा हात्तिखर्कका मंगलबहादुर लिम्बू, खोटाङ काहुलेका ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, खोटाङ चिसापानीका राजेन्द्र श्रेष्ठ, धनुषा मानसिंहपट्टीका संञ्जय ठाकुर, धनुषा हरिहरपुरका लालनसिंह कोहीरी, धनुषा महेन्द नगरका मनोज कुमार ठाकुर, धनुषा महेन्द्र नगरकै बुधनकुमार साह, ललितपुर लेलेका रमेश खड्का, गोरखा बत्राङका जीतबहादुर थापा, लमजुङ भोटेओडारका विष्णुहरि थापा र रोल्पा कुरेलीका भेकबहादुर थापा विदेश पुगेर काम नै सुरु नगरी अपहरणकारीको शिकार बन्न पुगे ।
काठमाडौंको मुनलाईट कन्सलटेन्सीमार्फत जोर्डनका लागि भनेर उडेका ति १२ जना नेपालीलाई एक महिनापछि युद्धग्रस्त मुलुक इराक पुर्याइयो । जहाँ वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले स्विकृति दिएको थिएन । इराक पुगेर एउटा अमेरिकी कम्पनीमा काम गराउने भनेर लगिएका उनीहरुलाई त्यहाँको खतरनाक अपहरणकारीको हातमा लगेर बुझाईयो । हुन त त्यो संयोग हुन सक्छ तर दृश्यले त्यस्तै देखायो । र सम्पत्ति कमाउने र परिवारमा खुशी ल्याउने सपना मनभरी साँचेर वैदेशिक रोजगारी गर्न इराक पुगेका १२ जना नेपाली दाजुभाईको २०६१ साल भदौ ११ गते त्यहाँको आतंककारी समूह अल–सुन्नाज अल अन्सारले निर्ममतापूर्वक हत्या गरिदियो ।
इराकमा नेपालीको हत्या भएपछि आक्रोशित नेपालीले नेपालमा कयौँ मेनपावर कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, कतिपय सञ्चारमाध्यम र सम्बन्धित संघ संस्थाहरुमा तोडफोड र आगजनी गरे । सोही कारण अहिले कतिपय व्यवसायी यस क्षेत्रबाट पलायन भइसकेका छन् । सुरोबुरो व्यवसाय धानेर बसेकाहरु त्यसबेला भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग लडिरहेका छन् । र विगत १० वर्षदेखि उनीहरुले भदौ १६, अर्थात् आजको दिन ‘कालो दिन’ का रुपमा स्मरण गर्दै आएका छन् । इराकमा नेपालीको हत्या भएपछि भड्किएको हिंसाले करिब डेढ अर्वभन्दा बढीको क्षति भएको सरकारी तथ्याङ्क छ भने ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति मेनपावर क्षेत्रमामात्र भएको दाबी नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको छ । त्यतिबेला २ सय ९७ म्यानपावरमा क्षति पुगेको संघको अध्ययनले देखाएको छ । तर अहिलेसम्म कसैले पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । आफूहरुको गल्तिविनै भएको क्षतिको पूर्ति सरकारले गर्नुपर्ने उनीहरुको दाबी छ । त्यसैका लागि उनीहरुले ९ वर्षसम्म भदौ १६ लाई ‘कालो दिन’ का रुपमा पनि स्मरण गरे । यद्यपि सरकारले उनीहरुको वास्ता त्यति गरेरन र गत वर्षदेखि उनीहरुले औपचारिक रुपमा कालो दिनको सम्झना गर्न छाडेका छन् । तथापी म्यानपावरको कामकारवाही र पूर्वस्विकृतहरुभने उनीहरुले आजको दिनमा ननिकाल्ने जनाएका छन् ।
व्यवसयीहरुले जे जस्तो दाबी गरेपनि गल्ती त उनीहरुबाट भएकै थियो र भइ पनि रहेको छ । सरकारले स्विकृति नदिएको मुलुकमा चोबाटोमार्फत कामदार आफूर्ति गर्ने काम अहिलेसम्म जारी राखेका छन् । त्यसबेला पनि जोडर्न भनेर इराक पुर्याइएका १२ नेपालीले स्वदेश फर्कन पाएनन् । त्यसमा मुख्य दोषी म्यानपावर कम्पनीहरुनै हुनुपर्दछ । रातारात मालामाल हुने सपना देखेर कतिपय व्यवसायीहरुले अवैध रुपमा गर्ने गरेको कामको नतिजा इराक घटनाजस्तै हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का अझै पनि व्यवसायीहरुमा देखिदैन । उनीहरुको यसतै चालामाला हो भने भदौ १६ नदोहोरिएला भन्न सकिदैन । तर हामी चाहान्छौँ यस्तो कालो दिनको आगमन नेपालीका लागि कहिल्यै पनि नहोस् ।
त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीहरुले सरकारले स्विकृति दिएको मुलुकमा मात्र कामदार पठाउने, सरकारले तोकेको सम्पूर्ण परिधिलाई अवलम्बन गर्ने दक्ष कामदारमात्र पठाउने, तोकेको अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका नभईनहुने कुराहरु किर्ते नगर्ने, कामदारको माग बमोजिम आपूर्ति गर्न मान्छे नपाउँदा जस्तोसुकैलाई पनि रोजगारीमा पठाउनेजस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म भदौ १६ आउने सम्भावना रहिरहन्छ र कुनै दिन आउन पनि सक्छ । त्यसबाट बच्नका लागि व्यवसायी आफै सचेत किन नहुने ?
इराकमा भएको घटनापछि सिर्जित नेपालको परिस्थिति साँच्चै कहालीलाग्दो बनेको थियो । त्यस घटनापछि वर्षेनी भदौ १६ लाई ‘कालो दिन’ का रुपमा व्यवसायीले सम्झँदै आएपनि गत वर्षबाट त्यो चलन पनि अन्त्य भएको छ । इराकमा नेपालीमाथि भएको त्यो घटना निन्दनीय त छँदैछ, त्यसमाथि ‘एउटाको रिस अर्कोलाई खन्याउँदा’ निस्केको परिणामबाट पाठ सिकेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । वैदेशिक रोजगारलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा व्याख्या गरिएपनि इराकको घटनाले हरेक वर्ष भदौ १६ मा यस्तो किसिमको ‘असुरक्षित वैदेशिक रोजगार’ बाट नेपालीहरु झस्किरहन्छन् । उतिबेलाको इराकको घटनापछि नेपाली कसरी इराक पुगे र त्यस बेला किन यस्तो समस्या आयो भन्नेबारेको सतर्कता अझै कम छ । एउटाले गल्ती गर्दा सबै व्यवसायीले पाएको दुःख र पहिलेको अवस्थामा आउन परेको समस्या अझै सच्चिएको छैन ।
कुनैले गल्ती गर्दा सबैलाई मुछ्ने परम्परा अझै कायम छ । ‘चोरबाटो’ प्रयोग गरेर भएपनि ‘मानवतस्कर’ हरुले सोझा नेपालीलाई इराक लगायतका देशमा गैरकानुनी रुपमा पठाउने क्रम अझै जारी छ । जसका कारण वैदेशिक रोजगार सुरक्षित बन्न सकिरहेको छैन । श्रम र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा यस्ता घटनाबाट शिक्षा लिएर सरकारी निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अब ‘इराक घटना’ नदोहोरियोस् भन्नका लागि आफू जाने देश र गर्ने कामको बारेमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने नेपालीले जानकारी लिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अर्को ‘भदौ १६’ को कालो दिन दोहोरिनु हुँदैन । अहिले पनि इराकमा द्वन्द्व जारी छ, तै पनि त्यहाँ नेपालीहरु गइनै रहेका छन् र समस्यामा परिरहेका छन् । यस्तो हुनु भनेको म्यानपावरको क्षेत्रमा छिरेका सिमित ‘मानवतस्कर’हरुकै सक्रियता हो । यसबाट बच्न स्वयम् इमान्दार गनिएका व्यवसायीहरुले ‘मानवतस्कर’हरुको गैरकानूनी हर्कत लाई किन उदाङ्गो पार्न सक्रिय नहुने ?
यो समाचार पढ्नुस्
इराकमा १२ नेपालीको हत्याः वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा व्यवसायीहरुले कालो दिनको रुपमा स्मरण गर्दै
Pingback: इराकमा १२ नेपालीको हत्याः वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा व्यवसायीहरुले कालो दिनको रुपमा स्मरण गर()
xo83gE klosjolvoutr, [url=http://mvdcidxeroqa.com/]mvdcidxeroqa[/url], [link=http://ifmpmjcvswke.com/]ifmpmjcvswke[/link], http://uyctgstyrxfy.com/